Banaanbax lagaga soo horjeedo hadalkii shalay ee Madaxweynaha oo Muqdisho ka dhacy - Awdinle Online
Banaanbax lagaga soo horjeedo hadalkii shalay ee Madaxweynaha oo Muqdisho ka dhacy
Magaalada muqdisho meelo kamid ah waxaa Maanta ka dhacay banaanbax kale oo ay dhigayeen qaar kamid ah Shacabka Muqdisho,kuwaas oo sheegayay inay kasoo horjeedaan in la siyaasadeeyo xaquuqda iyo maqaamka Gobolka Banaadir iyo inay kasoo horjeedaan hadalkii shalay ee Madaxweynaha Soomaaliya.
Dadka banaanbaxa dhigayay oo isugu jiray, Odayaal, Dhalinyaro iyo Haween ayaa isugu soo baxay degmooyin ka tirsan gobolkan Banaadir,waxaana ay dalbanayeen in Gobolka Banaadir dadka ku nool ay helaan xaquuqdooda.
Banaanbaxayaasha ayaa waxaa ay wateen boorar ay ku qoran yihiin Erayo ay kamid tihiin (BANAADIR DADKEEDA AYAA LAGALA TASHAN) iyo (AFDUUB YEELI MEYNO) iyo Erayo kale.
Islow Cabdirahman Islow Cumar oo kamid ah Odayaasha Dhaqanka Muqdisho ayaa sheegay inay ka dagaalamayaan oo ay diidan yihiin dulmiga iyo warkii kasoo yeeray madaxweynaha oo ah in dadka muqdisho lagu dhaqo qodobka 9aad ee dastuurka ayna doonayaan in dhamaan Mamaul Goboleedyada lagu dhaqo.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in Muqdisho ama Gobolka Banaadir ay dadkiisa difaacanayaan,isla markaana xaquuqdiisa aysan qaadan karin Xldhibaano laaluush la siiyay sida uu hadalka u dhigay.
Banaanbaxaan Maanta ka dhacay Magaalada muqdisho ee lagu dalbanayay Maqaamka G/Banaadir ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli isla Maanta uu Muqdisho ka dhacay banaanbax uu soo abaabulay Maamulka G/Banaadir oo lagu taageerayay hadalkii Madaxweyne farmaajo.
Previous articleMuqdisho oo la keenay askartii ku dhaawacantay dagaalkii ka dhacay gobolka Bakool
Next articleGuriga gadoomiye mursal oo kulan uga socda Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif